I-Mayen emangalisayo kwimithi endala entliziyweni yendalo
Indlu yeholide eyakhiwe ngamaplanga yonke sinombuki zindwendwe onguRomaine
Indlu ezinhle iinkuni endala (Mayen) zalungiswa kwaye ixhotyiswe, ibekwe evulekile indiva, imizuzu emi-5 ngemoto La Forclaz kunye La Sage kwi 1800m ephakame kwi Val d'Hérens kwidolophu Evolene. I-chalet yakhiwe ngaphezulu kwemigangatho emi-3 kwaye inokuhlala ukuya kuthi ga kwi-6 abantu. Indawo yayo entliziyweni yendalo, kwindawo ezolileyo ivumela ukuphiliswa ngokupheleleyo. Ukunyuka okuninzi kunokwenzeka kwi-chalet.
I-chalet, imigangatho emi-3, yenziwe ngolu hlobo lulandelayo:
Umgangatho ophantsi: igumbi lokulala eliphindwe kabini (i-180x200 ibhedi) kunye nokufikelela kwi-terrace (utshani), igumbi lokulala eli-1 kunye nebhedi ye-140x200, igumbi lokuhlambela elineshawa. Igumbi elinomatshini wokuhlamba.
Kumgangatho wokuqala ikhitshi elixhotyiswe ngokupheleleyo kunye nokufikelela kwithafa yamatye ejonge emazantsi, ikhitshi livuleleke kwigumbi lokuhlala. Isitovu saseSweden esinemithi enikeziweyo siyafumaneka. I-mezzanine kumgangatho ophezulu ineebhedi ezi-3 ze-90x200.
Ukufikelela kwi-chalet ukusuka ngoNovemba ukuya ku-Epreli kuhamba ngeenyawo (izihlangu zekhephu okanye izikhumba zeelwandle) ngenxa yeemeko zekhephu. Kuthatha uhambo lwe-20!
Umbuki zindwendwe ngu- Romaine
Hlola ezinye iindawo onokukhetha kuzo e- La Forclaz